Dia firenena mpikambana ao amin'ny World Trade Fikambanana rosiana Mpisolovava an-Tserasera - Rosiana rehetra ireo Mpisolovava eto! Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Dia firenena mpikambana ao amin'ny World Trade Fikambanana rosiana Mpisolovava an-Tserasera
 ho Toy ny, WTO firenena mpikambana solontena
Ny tany am-boalohany firenena mpikambana ao amin'ny World Trade Fikambanana ireo ny antoko ny GATT taorian'ny ratifying Uruguay Manodidina ny Fifanarahana,  ary ny Eoropeana fiaraha-moninaIreo nahazo toerana misy azy izany ao ny fidirana an-kery ao amin'ny janoary na amin ny daty ratification. Rehetra ireo mpikambana hafa no nanatevin-daharana ny fikambanana ho toy ny vokatry ny fifampiraharahana, ary ny maha-mpikambana dia ahitana ny mampifandanja ny zo sy ny adidy.  Ny dingana lasa iray izao Tontolo izao ara-Barotra ny Fikambanana (WTO) mpikambana tsy manam-paharoa ho an'ny tsirairay mpangataka firenena, ary ny tsy ny fidirana dia miankina ao amin'ny firenena ny dingana fampandrosoana ara-toekarena sy ny amin'izao fotoana izao ny varotra fitondrana.  Ny manolotra ny fidirana dia nomena indray mandeha marimaritra iraisana dia tonga teo anivon ny mpikambana.  Ny dingana mila momba ny dimy taona, amin'ny ankapobeny, fa izany dia afaka ny handray ny sasany amin'ireo firenena efa ho folo taona raha toa ny firenena dia latsaky ny manolo-tena tanteraka ho amin'ny dingana, na raha toa ny olana ara-politika hiditra. Fohy indrindra fidirana fifanarahana dia hoe Kyrgyzstan, maharitra taona ka hatramin'ny volana. Ny lava indrindra ireo izay Rosia, maharitra taona sy volana,  Vanuatu, maharitra taona sy volana,  sy Shina, maharitra taona sy volana. n'ny global ny varotra sy ny.  ao Iran, dia nanaraka an'i Alzeria, dia ny toe-karena ny lehibe indrindra harin-karena faobe sy ny varotra ivelany ny WTO, mampiasa angon-drakitra.  Ny firenena te-accede ny WTO manaiky ny fampiharana Maneran-tany ny Filan-kevitra. Ny governemanta amin'ny fampiharana ny maha-mpikambana dia mba hamaritana ny lafiny rehetra ny ara-barotra sy ara-toekarena ny politika izay efa a nitondra teo WTO fifanarahana.  Ny fangatahana dia atolotra ny WTO amin'ny memorandum izay nandinika amin'ny alalan'ny miasa ny antoko misokatra ho an'ny rehetra liana WTO ireo Mpikambana, ary ny fiatrehana ny firenena ny fampiharana. Ho firenena lehibe toy ny Rosia, sy firenena maro handray anjara amin'ny ity dingana ity. Ho kely kokoa ny firenena, ny Quadrilateral vondrona firenena - izay ahitana ny vondrona EOROPEANA, i Etazonia, Kanada sy Japana sy ny fangatahana ny firenena manodidina dia matetika tena anjara.  Ny mpangataka dia mampiseho amin'ny antsipirihany memorandum ny Miasa ny Antoko eo amin'ny varotra ivelany ny fitondrana, mamaritra, ankoatra ny zavatra hafa, ny toe-karena, ara-politika, ao an-tokantrano sy ny varotra iraisam-pirenena ny fitsipika, sy ny fananana ara-tsaina politika. Ny Miasa ireo Mpikambana ao amin'ny Antoko mametraka fanontaniana voasoratra ny mpangataka mba hanazavana ny lafiny ny varotra ivelany ny fitondrana manokana ny saina ho aloa amin'ny mari-pahaizana tsy miankina amin'ny toe-karena sy ny halehiben'ny izay ny governemanta-dalàna mangarahara.  Rehefa afaka izany rehetra ilaina fototra vaovao efa nahazo, ny miara-Miasa amin'ny Antoko dia manomboka fivoriana ny mifantoka amin'ny olana ny fitoviam-pijery eo ny WTO fitsipika sy ny Fangatahana ny iraisam-pirenena sy eto an-toerana ny varotra ny politika sy ny lalàna. Ny WP mamaritra ny fepetra fidirana ho ao an-WTO ho an'ny mpangataka firenena, ary mety hihevitra-potoana tetezamita hamela ny firenena sasany leeway ao manaja ny WTO fitsipika.  Ny dingana farany ny fidirana tafiditra teo amin'ny roa tonta ny fifampiraharahana eo amin'ny mpangataka firenena sy ny hafa miara-Miasa ireo mpikambana ao amin'ny Antoko momba ny tany sy ny fanoloran-tena amin'ny tariff ambaratonga sy ny fidirana amin'ny tsena ho an'ny entana sy ny asa.
Ireo lahateny handrakotra tariff tahan'ny sy ny manokana ny tsena ny fidirana amin'ny fanoloran-tena, sy ny hafa ny politika amin'ny entana sy ny asa.
Ny mpikambana vaovao ao amin'ny fanoloran-tena ka mampihatra ihany koa ny rehetra WTO mpikambana ara-dalàna eo ambany tsy-fanavakavaham-bolokoditra ny fitsipika, na dia ifanarahana bilaterally. Amin'ny teny hafa, ny resaka mamaritra ny soa (ao ny endriky ny fanondranana ny fahafahana sy ny antoka) hafa WTO ny mpikambana dia afaka hitranga, rehefa ny mpikambana vaovao mpikamban'ny. Ny fifampiresahana dia mety ho tena sarotra dia efa nilaza fa ao amin'ny toe-javatra sasany, ny fifampiraharahana dia efa lehibe toy ny rehetra manodidina ny multilateral ny fifampiraharahana ara-barotra.  Rehefa teo amin'ny roa tonta miresaka ny hamarana ny teniko, ny miara-miasa amin'ny antoko finalizes ny fepetra fidirana, mandefa ny fidirana fonosana, izay ahitana ny famintinana ny rehetra WP fivoriana, ny Protocol ny Fidirana (ny volavolan-dalàna ny mpikambana fifanarahana), sy ny lisitra ('fandaharam-potoana') ny mpikambana mba ho ny fanoloran-tena amin'ny Ankapobeny Filan-kevitra na ny filankevitry ny Minisitra ny Fihaonambe. Raha vao ny Filan-kevitra Maneran-tany na ny filankevitry ny Minisitra ny Fihaonambe dia manaiky ny teny ny fidirana, ny mpangataka ny antenimiera dia tsy maintsy hanamafy ny fifanarahana Arofenitra ny Fidirana alohan'ny dia afaka ho lasa mpikambana ao.  Ny antontan-taratasy ampiasaina ao amin'ny fidirana dingana izay embargoed nandritra ny fidirana dingana dia nivoaka indray ny firenena ho lasa mpikambana ao.  hatramin'ny desambra ny taona, ny WTO dia mpikambana.
ny fiakaran'ny harin-karena faobe
 ny milaza ny antoko ny GATT amin'ny faran'ny taona, ny rehetra satria lasa WTO mpikambana afa-tsy ho Repoblika Sosialista federalin'i Yogoslavia, izay efa rava tamin'ny taona, ary mihantona amin'ny fandraisana anjara amin'ny GATT tamin'izany fotoana izany.
 Efatra hafa etazonia, Shina, Libanona, Liberia, any Syria, ireo antoko GATT fa taty aoriana niala tao amin'ny fifanekena mialoha ny fananganana ny WTO.  Shina sy Liberia efa hatramin'ny acceded ny WTO. Ny sisa WTO mpikambana acceded taorian'ny voalohany lasa WTO mpanara-baovao sy ny fifampiraharahana maha-mpikambana. Ny firenena ao amin'ny Vondrona Eoropeana dually mba manana solontena, araka ny vondrona EOROPEANA dia feno ny mpikambana ao amin'ny fikambanana. Tsy masi-mandidy ny firenena mizaka tena sampana ny firenena mpikambana dia afaka ny ho feno ny mpikambana ao amin'ny WTO nanome fa izy ireo samy hafa fomba amam-panao faritany amin'ny feno-tena ny fitondran-tena ny ny avy any ivelany ny fifandraisana ara-barotra. Noho izany, Hong Kong lasa GATT voan'ny ny antoko, ny ankehitriny faranana 'fiahiana' fomba ny United Kingdom (Hong Hong Kong mampiasa ny anaran 'i Hong Kong, Chine' satria), toy ny nataon'i Makaô.
Ny mpikambana vaovao iray karazana ity dia ny Repoblikan'i Sina (Taiwan), izay acceded ny WTO tamin'ny, ary tsara noho ny fampiharana amin'ny alalan'ny fidirana eo ambany ny anaran 'Samihafa ny fomba amam-panao Faritany Taiwan, Penghu, Mihakely sy Matsu (Shinoa Taipei)' ka dia tsy nisy nandà noho ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina-Sina politika.
Ny WTO koa mpanara-maso ny fanjakana,  fa afa-tsy ny Fanahy Jereo dia tsy maintsy manomboka ny fidirana fifampiraharahana ao anatin'ny dimy taona lasa mpanara-maso. Ny farany firenena niaiky toy ny mpanara-maso ihany aloha ny fampiharana ny ho feno ny maha-mpikambana dia Equatorial Guinea tamin'ny, fa nanomboka ny taona izany ihany koa ny amin'ny maha-mpikambana feno ny fifampiraharahana. Tamin'ny taona Liberia ary Ginea ampiharina mivantana ho feno ny maha-mpikambana. Ny sasany iraisam-pirenena ny fikambanana ihany koa nanome mpanara-maso ny toerana misy ny WTO vatana.  Ny Manampahefana Palestiniana nanaiky ny fangatahana WTO mpanara-maso ny toerana misy ny volana oktobra  ary ankoatra izany, tamin'ny volana aprily.  Rosia no iray amin'ireo ihany no lehibe roa ny toe-karena ivelany ny WTO taorian'ny Arabia Saodita niditra tamin'ny taona.  Dia efa nanomboka fifampiraharahana mba hanatevin-daharana ny WTO ny teo alohany tamin'ny taona.
Ny farany lehibe hevitra ny fifandirana - mifandray amin'ny taona ny adin'i rosia sy georgia-zeorziana ny Ady - dia voavaha amin'ny alalan'ny fanelanelanana amin'ny Soisa,  mitarika ny rosiana maha-mpikambana azy tamin'ny taona.
Ny iray hafa dia i Iran, izay mpanara-maso ny fanjakana sy nanomboka ny fifampiraharahana tamin'ny taona. Ity tabilao manaraka ity ny lisitry ny rehetra amin'izao fotoana izao ny mpikambana, ny daty fidirana sy teo aloha GATT maha-mpikambana.
 ity tabilao manaraka ity ny lisitry ny rehetra WTO ny mpanara-maso.
 Ao anatin'ny dimy taona ny nahazoan'izy ireo ny mpanara-maso ny toerana misy ny WTO, etazonia no takiana mba hanomboka ny fifampiraharahana ny fidirana amin'ny fikambanana.  ity tabilao manaraka ity ny lisitry ny rehetra ny firenena mpikambana ao amin'ny firenena MIKAMBANA sy ny firenena MIKAMBANA mpanara-maso ny firenena izay sady tsy ny mpikambana na ny mpanara-maso ny WTO.
Tsara indrindra Mpisolovava ho Insolvency sy ny fandaminana indray ny Lalàna tany Moscou, any Rosia - Best Mpisolovava